Ka xakamee HomeKit ka Apple Watch-kaaga WristControl | Waxaan ka socdaa mac
Ka xakamee HomeKit ka Apple Watch-kaaga WristControl
Haddii aad jeceshahay inaad ku ciyaarto qalab otomaatiga guriga ah oo aad haysatid dhowr qalab HomeKit lagu rakibay gurigaaga, waxa ugu caadiga ah waa in lagu xakameeyo nidaamka adiga oo isticmaalaya iPhone-kaaga. Laakiin marar badan ayaad adigu ku dallacaysaa, oo haddii aad qol kale ku jirto, ama aad ku qaylisid HomePod-kaaga, haddii aad hayso, ama aad ku isticmaasho barnaamijka "Guriga" Apple Watch-kaaga.
Kontoroolka gacanta waa codsi dhinac saddexaad ah oo wanaagsan kaas oo ka dhigaya inta ugu badan ee suurtogalka ah ee ka-xakameynta qalabkaaga 'HomeKit' qalabkaaga 'Apple Watch' wax ka badan dalabka Apple-ka ah.
WristControl waa codsi dhinac saddexaad u ah Apple Watch oo kuu oggolaanaya inaad xakameyso dhammaan qalabkaaga 'HomeKit' iyo muuqaalada aad uga wanaagsan «Casa»Asal ahaan Apple. Shaashadaheeda waa cad yihiin, waxay u shaqeysaa sida aad filayso waana mid si buuxda loo habeyn karo.
WristControl waxaad ku leedahay saddex tab kaas oo lagu shaqeynayo; Muuqaallo, Dookhyo iyo Dhammaan. Wax walba waa wax caqli gal ah waxaadna dooneysaa inaad ku dhejiso qalabkaaga ugu badan ee la isticmaalo ee Favorites sababo muuqda. Muuqaallada ayaa martigelin kara muuqaal kasta oo horey loogu qaabeeyey barnaamijka 'Guriga'.
Heerarka: Ku dar muuqaal kasta oo HomeKit ah oo jira kuna bilow qasabad fudud. Waad kala dooran kartaa inta udhaxeysa muuqaalka shaashadda iswada leh oo kaliya astaamo, ama aragti faahfaahsan oo faahfaahsan oo leh magacyada muuqaalka.
jecel: Ka xulo liiska qalabka isku habboon ee marinka degdegga ah laga heli karo. Taabo qalabka si aad u daarto ama u demiso.
Dhammaan: Dhammaan qalabka ku habboon ayaa lagu soo bandhigi doonaa halkan, laakiin waad qarin kartaa mid kasta haddii aad rabto
Dhamaan muuqaalada iyo qalabka waxaad ka dooran kartaa wax ka badan 270 icons kala duwan Muuqaal kasta waxaa loo rogi karaa dhibaato, iyadoo la adeegsanayo dhibka si loo furo arjiga isla markaana goobta si toos ah u socon doona. Maareyn aad u dhameystiran oo ku saabsan HomeKit-kaaga Apple Watch. WristControl waad ka soo dejisan kartaa app Store loogu talagalay Apple Watch oo qiimihiisu yahay 2,29 Euros.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Ka xakamee HomeKit ka Apple Watch-kaaga WristControl
Shirkada wax soosaarka ee Hillary Clinton ayaa dooneysa inay sii wado la shaqeynta Apple TV +